कोक खाँदा स्वास्थ्यमा पर्ने असरहरु यस्ता छन्
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्यकोक खाँदा स्वास्थ्यमा पर्ने असरहरु यस्ता छन्
गर्मीको समयमा सबैभन्दा बडी पिउने पेयपदार्थ मध्ये कोक पनि एउटा हो । कोक हामी कुनै पार्टी हुँदा पनि खाना सँगै खाने गर्छौं । कोक खाँदा ग्यास्ट्रिक हट्छ भन्ने भ्रम धेरै मानिसहरुमा हुने गर्छ । विभिन्न अध्ययनले कोक खानु स्वास्थ्यको लागी निकै हानिकारक रहेको देखाएको छ ।
कोक खाँदा पुग्ने हानीहरु यस्ता छन् :
१. दाँतको बिजोग : सुगर र एसिड भएका खाना र पेयर पदार्थले दाँतलाई छिद्र पार्दछन । कोक यी दुबै चीजको भरमार उपस्थिति हुन्छ । यसले दाँतमा भएको इनामेल हटाउँछ । यस्तो भएमा उपचार त गर्न सकिएला तर दाँतको उपचार उस्तै महंगो पर्छ । यसका लागि तपाईले कोक खाए लगतै ब्रश गरेर असर घटाउँछु भन्न त सक्नु हु्न्छ तर बुद्धिमानी कोक खान छोड्नु र पानीमै रमाउनु हो । संसारमा पानी जस्तो उपयुक्त अर्काे कुनै पेय पदार्थ छैन् ।
२. मधुमेहको खतरा : कोकमा अत्याधिक मात्रमा कार्बाेहाइड्रेट हुन्छ त्यसैले यसले मधुमेहलाई सधै निम्ता दिन्छ भनिन्छ। यसले मात्र २० मिनेटमा तपाईको ब्लड प्रेसर बढाउन सक्दछ । एकपटक मधुमेहको शिकार भइसकेपछी यसलाई निमिट्यान्न पार्न गाह्रो छ। त्यसैले यस्तो खतराको एउटा संभावनालाई हटाइदिएकै राम्रो ।
३. तपाईलाई बलियो बनाउँदैन, विज्ञापनको पछि नलाग्नुस : ठुला ठुला खेलाडीले विज्ञापनमा कोक खाएर कसिलो शरिर बनाएको देखेर नलोभिनुस । असलियतमा यस्तो हुँदैन् । कोक जस्ता पेय पदार्थले तपाईको मेटाबोलिजम कमजोर पार्छ। तपाईको शरिरले पर्याप्त मात्र बोसोलाई खपत गर्न पनि सक्दैन । त्यसैले शुद्ध पिउने पानीको विकल्प नखोज्नुस ।
४. शरिरको बेहाल : कोक लगायतका पेय पदार्थलाई गुलियो बनाउन प्रयोग गरिने कृतिम स्विटनरहरुले तपाईले अनुमान गरे भन्दा बढि हानी गर्दछन । यी तत्वहरुले शरिरको भित्री अंगहरुलाई नराम्रो असर पुर्याउँछन । त्यसैले कोक पिएर आनन्द लिए भन्ने नसोच्नुस बरु जिन्दगीलाई सकसपुर्ण बनाउँदैछु भने मनन गर्नुस ।
५. सन्तान नै नहोला : कोकको नियमित सेवनले प्रजनन प्रणालीमा व्यापक असर गर्दछ । सन्तान उत्पादन क्षमतामै जोखिम लिनु भन्दा कोक नपिएकै बुद्धिमानी होइन र ?